RIP: Frank Batten Sr - Onye Billionaire Never Nụtụbeghị | Martech Zone
RIP: Frank Batten Sr - Onye Billionaire nke I Nughi
Na Tọzdee, Septemba 15, 2009 Wednesday, February 10, 2016 Douglas Karr
Imirikiti mmadụ anụbeghị banyere Frank Batten Sr na mpụga Hampton Roads, Virginia. Mgbe mbụ m hapụrụ US Navy wee gaa ọrụ na The Virginian-Pilot, anụghị m ihe ọ bụla ma ọ bụghị nnukwu ihe site n'aka ndị Pressmen na-arụ ọrụ maka akwụkwọ akụkọ ahụ mgbe ha na-ekwu maka Frank Paul Nwokocha. Amaara ya na ọ na-abịakwute ndị ọrụ akụkọ ma soro ndị ọrụ niile kwurịta ya - nke ọ kachasị mara aha ya ruo mgbe ụlọ ọrụ ya toro oke.
Ruo ọtụtụ afọ, ndị ọrụ Landmark wepụtara ụbọchị ọmụmụ ha wee nata ego izu 2 na ekeresimesi. Mgbe oge siri ike ma ọ bụ ngalaba agbakọ, anyị anaghị ahapụ - ndị ọrụ were afọ ofufo lara ezumike nká ma ọ bụ kwaga ọnọdụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ mgbe niile banyere ndị ọrụ na Frank.
Mgbe Landmark Communications nakweere njikwa njikwa, njikwa nhọrọ ezubere iche, yana mmemme mmelite na-aga n'ihu, ndị njikwa niile gafere ọzụzụ niile ha chọrọ. Mgbe m dị afọ iri abụọ, agara m ọzụzụ n'ọchịchị onye isi wee hụ Frank n'onwe m. N'ime afọ ole na ole, enwetara m nduzi na njikwa nlekọta karịa ọtụtụ mmadụ nwere ọrụ ha dum. Frank kwenyere na ndị ọrụ kachasị mma gụrụ akwụkwọ ma mesoo ha, ụlọ ọrụ ka mma. Ọ na-arụ ọrụ.
Ka ọ na-erule oge ahụ, Frank akụzierela onwe ya ikwu okwu site na ịkwa ụra mgbe ọrịa olu ya kwụsịrị olu ya. Pụrụ ịnụ olu ya nke ọma. Otu onye jụrụ, sị, “Ego ole ka ezuworo, Frank?” Azịza ya bụ na ọ bụghị maka ego ahụ - ọ bụ maka ịchekwa ọdịnihu ụlọ ọrụ ahụ na iche maka ezinụlọ niile nwere elu ụlọ.
Akụkọ kacha atọ ụtọ nke Frank kwuru bụ mmalite The Weather Channel. Dị ka ọ dị ka ọ na-ada, ụlọ ọrụ ahụ na-agbapụta ego na Frank kwuru na ya nwere n'ụzọ nkịtị ka onye ọ bụla nwee mkpịsị pink ya na akpati ya. O weghaara ohere, ya na ndi ụlọ ọrụ USB gbanwere ụlọ ọrụ niile gbanwere ụgwọ ụlọ ọ bụla! O weputara otu n'ime ọwa kacha aga nke ọma na igwe onyonyo. A sị na ọ naghị alụ ọgụ kansa akpịrị, anyị nwere ike ịnwe Landmark News Network kama Ted CNN.
Ndị mmadụ amaghị maka Frank Batten n'ihi na ọ bụ nwayọ nwayọ nwayọ. Echetara m mgbe ụlọ ọrụ manyere Frank ịtọzigharị ọfịs ya ma wepụ sofa na oche ọ na-eti ihe ọtụtụ afọ. Ọ bụ ezigbo onye mmeri nye ụlọ ọrụ ahụ, obodo na ọbụla mmadụ. N'oge nkewa, o tinyere ndụ ya n'ihe ize ndụ wee gaa n'ihu na-ekwu okwu maka mwekota n'ihi na ọ bụ ihe ziri ezi ịme.
Ọ bụ ụbọchị mwute nye m na nkasi obi m na-apụ na ezinụlọ ya, ọkachasị Frank Batten Jr. Obi dị m ụtọ na m zutere Frank Batten, Sr. Mgbe m tụrụ ihe ịga nke ọma nke ndị mmadụ, ọ na-abụkarị megide ihe m na-echeta banyere Frank. Ọ dị obi umeala, na-arụsi ọrụ ike, nwee ekele, na-emeso ndị ọ na-arụrụ ya ọrụ ọrụ nke ọma, ma nwee ike ịmalite azụmaahịa ya n'ike n'ike. Onweghi onye toro toro ma echeghị m na onye ọ bụla ga-eme ya!
GỤKWUO banyere ndụ na-adọrọ mmasị Frank Batten dị ka nke Earl Swift dere na Virginian-Pilot. Frank Batten Sr bụ onye otu nde mmadụ enweghị ike ịnụ banyere gị - mana ị nwere ike ịmụ ọtụtụ ihe na ndụ o biri.
Foto sitere na Virginian-Pilot
Tags: billionaireFrank batten srnkwukọrịta akaraOkachasina-enye gị nkwadoNwoke na-amaghị nwokeihu igwe ọwa
Mee Blog Traffic na eCourse na Adreesị Abụọ
Nabata na Blog Ahịa nke Blog nke 2009
Septemba 16, 2009 na 2:47 ehihie
Doug, kedu ụtụ mara mma nye onye doro anya nyere aka ịkpụzi gị. Anyị niile kwesịrị inwe chi ọma nke inwe "Frank" iji leba anya na ọrụ anyị!